နည်းပညာနယ်ပယ်ကို သေနတ်နှင့် ချိန်ရွယ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ … ပညာရှင်အားလုံး စုပေါင်းကာကွယ်ကြ (မင်းထက်ဘုန်းမြတ်) | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
နည်းပညာနယ်ပယ်ကို သေနတ်နှင့် ချိန်ရွယ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ … ပညာရှင်အားလုံး စုပေါင်းကာကွယ်ကြ (မင်းထက်ဘုန်းမြတ်)
January 31, 2008, 12:56 am Filed under: Articles စစ်အစိုးရဟာ သံဃာတော်များဦးဆောင်တဲ့ စက်တင်ဘာလူထုလှုပ်ရှားမှုပြီးဆုံးသွားချိန်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်လျှက်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်များစွာနှင့် လူထုလှုပ်ရှား မှုအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်များ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတိုင်း သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ စစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားသူအားလုံးကို ကြောက်လန့်အောင်ခြိမ်းခြောက် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုများတွင် တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာကြပြန်တဲ့ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု၏ သံတော်ဆင့်များဖြစ်ကြတဲ့ ဘလော့ဂါများကိုတော့ အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကို ပွင့်လင်းပျက်သားစွာဝေဖန်ပြောဆိုရေးသားလျှက်ကြသော ဘလော့ဂါများကို ဖိနှိပ်အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလာကြပြန်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆိုက်ဘာအတိုက်အခံ မြန်မာဘလော့ဂါအားလုံးကို နှိုးဆော်သတင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ ဒီလိုပဲ စစ်အစိုးရကိုလည်း ကျွန်တော်များ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ ဘလော့ဂါများကိုယ်စားပြောကြားလို တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေလဲရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါဆိုတာ ဂျိုပါ တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြေခံပြည်သူလူထုတွေနှင့်အတူ ဘက်စ်ကား အတူစီးပြီးနေကြတယ်…ဒီလိုပဲ အခြေခံပြည်သူတွေနှင့်အတူ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ စားဝတ်နေရေး ကိုအများနည်းတူ ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်နေကြရသူတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပင် ဆောင့်ဖမ်းစီးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် အမှန် တရားနဲ့ အများကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အကာအကွယ် ဆိုတာရှိနေမှာပါပဲ။
ဘုရားသာသနာ ၂၅၀၀ ပြည့်ပြီး သိကြားသာသနာ ၂၅၀၀ နှစ်ထဲမှာရောက်နေပါတယ်လူတွေဟာ တရားအစစ်အမှန်ကိုမေ့လာကြမယ်သိကြားမင်းစောင့်တဲ့သာသနာဆိုတော့နတ်တွေသိကြားတွေပို ယုံကြည်လာကြမယ်ဗေဒင်ယဒယာတွေလုပ်ကြနတ်ကိုးကြ ဘိုးတော်တွေ ဘုန်းကြီးအတုအယောင်တွေပေါမယ်ငွေနောက်လိုက်ကြမယ်မင်းမာနတွေထောင်ကြမယ်တရားစစ်တရားမှန်မေ့ကြမယ်ဂုဏ်ထူးရာထူးတွေမက်ကြမယ်အာဏာတွေလုကြမယ်အပျော်အပါးများမယ်အာရုံမျိုးစုံယစ်မူးကြမယ်ုပြိုင်ကြမယ် ကြွားကြမယ်လောကစည်းစိမ်ကိုကုန်အောင်ခံစားလိုကြမယ်လောကုတ္တရာကိုမေ့လျော့ကြမယ်ကုသိုလ်ရေးကိုမေ့ကြမယ်တရားရှိတာမရှိတာ မသိကြတော့ဘဲငါတကောကောနေကြမယ်။ငါမှန်တယ် ငါတော်တယ်ရန်လုပ်ကြ အော်ကြဖြစ်နေကြမယ်တိုက်ကြ သေကြ အကုသိုလ်ပွားကြဆဲဆိုကြလုပ်နေကြမယ်။ခွပ်တယ်ဟေ့ ခွတယ်ဟေ့ဆော်တယ်ဟေ့အာဏာကိုဖီဆန်ကြဟေ့တော်လှန်ကြဟေ့သွေးမြေကျပြီဟေ့အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားလေးတွေပြောကြမယ် ဟောကြမယ်
ကိုယ်မပါပါစေနဲ့ သတိအမြဲရှိပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ထားပါမိမိအေးချမ်းသလိုသူများတွေလည်းအေးချမ်းနိုင်အောင်မေတ္တာပို့ ကြပါ။
Comment by May Burma
February 1, 2008 @ 5:24 pm Reply	ဟုတ်တယ် .. မလင်လက်. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတာ ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာဟာ ဘလော့ပဲ၊ ဘလော့နှင့် လူတွေကို information ဘယ်ဟာ ဆိုးသည် ဘယ်ဟာ ကောင်းသည်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာ. နအဖ ကလည်း လုပ်ပါတယ်။ ဝေဒ ဖြန့်ချီရေးဆိုတာလား၊ သူတို့ ဝေဒဖြန့်ချီဖို့ဆိုပြီး ကြံ့ဖွန့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ က အများကြီး အားသာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စည်းလုံးကြရင် ဒီကောင်တွေ မခံပါဘူး။
Comment by Min Min
February 9, 2008 @ 7:28 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI